खैरो हिरोइनसहित पक्राउ परेका वडाध्यक्षलाई छुटाउन व्यापक चलखेल « News24 : Premium News Channel
खैरो हिरोइनसहित पक्राउ परेका वडाध्यक्षलाई छुटाउन व्यापक चलखेल
वीरगन्ज । गत आइतबार राति खैरो हिरोइन ९ब्राउन सुगर० सहित पक्राउ परेका पर्साको पकहामैनपुर गाउँपालिका वडा नंं. १ का वडाध्यक्ष सहित पक्राउ परेका ३ जनालाई जोगाउने षड्यन्त्र सुरु भएको छ ।
सरकारी नम्बर प्लेटको पल्सर मोटरसाइकल आफै चलाउँदै गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई सादा पोशाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले ७९ ग्राम खैरो हिरोइन ९ब्राउन सुगर० सहित पक्राउ गरेको थियो ।
उनीहरुलाई विन्दवासिनी स्थितबाट करिब रातिको साढे १० बजेको सममया पक्राउ गरेको वडाध्यक्ष लगायत तिनै जनालाई बचाउनका लागि अहिले व्यापक कसरत भइरहेको छ ।
नेकपा एमाले निकट पार्टीबाट निर्वाचित वडाध्यक्षलाई प्रहरी हिरासतबाट मुक्त गराउनका लागि नेकपा एमाले पार्टीका नेता कार्यकर्ता एवं पार्टी निकट पत्रकारहरु पनि लागि परेको बताइएको छ ।
नेकपा एमालेका नेता देखि एमाले निकट पत्रकार संघका नेताहरु अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि अदालतसम्म दौडधुप गरि रहेको बताइएको छ ।
यहाँसम्म कि उनीलाई बचाउन लागि पार्टीका नेता कार्यकर्ता मात्र नभई नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाका केही पदाधिकारी पनि लागि परेका छन् ।
वीरगंजबाट प्रकाशित हुने विभिन्न अनलाइनदेखि पत्रपत्रिकाहरुमा सहनीको पक्षमा समाचारहरु प्रकाशन भएकोले पनि उनलाई बचाउन व्यापक चलखेल भइरहेको पुष्टि हुन्छ ।
सहनीलाई फसाउन खोजिएको भनेर विभिन्न पत्रपत्रिका एवं अनलाईनहरुमा समाचार प्रकाशन भएको देखिन्छ । विशेष सूचनाको आधारमा पर्सा प्रहरीले गत आइतबार राति करिब साढे १० बजेको समयमा अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन सहित एकजना वडाध्यक्ष लगायत ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा पर्साको पकहामैनपुर गाउँपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष ५५ वर्षीय अम्बिका भनिने अमेरिका सहनी, वडासदस्य ४० वर्षीय बलिष्टर सहनी एवं लागुऔषध कारोबारी ५२ वर्षीय रामदेश सहनी रहेका छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरीयाबाट खटिएको टोलीले गएराति करिब साढे १० बजे रातिको समयमा जिल्ला पर्सा वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं। १९ बर्वा स्थितबाट तिनैजनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
रातिको समयमा एकैसाथ आएका ना.१ ब ३५९५ नम्बरको सरकारी नम्बर प्लेटको पल्सर र ना.६२ प १९४२ नम्बरको सिबिजेड मोटरसाइकल रोकी चेकजाँच गर्दा सरकारी नम्बरको ना.१ ब ३५९५ नम्बरको मोटरसाइकलको फिल्टर बक्सबाट ७९ ग्राम लागु औषध खैरो हिरोइन बरामद भएको थियो ।
पक्राउ परेका तिनैजनालाई ईलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियामा राखि लागु औषध सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ । तर वडाध्यक्षलाई फसाइएको भनेर समाचारहरु प्रकाशन गरेर मुद्दालाई मोड्न खोजिएको देखिन्छ ।
प्रहरीले सहनीलाई रँगेहात लागु औषध सहित पक्राउ गरेको भएपनि वीरगंजबाट प्रकाशित हुने केही पत्रपत्रिका एवं अनलाईनहरुमा सहनीलाई फसाइएको भनेर समाचारहरु प्रकाशन गर्न लगाएर मुद्दालाई कमजोर पार्न खोजिएको बताइएको छ । तर यस्ता भ्रामक समाचारले अनुसन्धानमा कुनै किसिमको असर नपार्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक ओमप्रकाश खनालले जानकारी दिए ।